Chhaharaa | क्रुर अपराधी आलम पनि छुट्ने !
क्रुर अपराधी आलम पनि छुट्ने !
काठमाडौं । छसस । बम विस्फोटका घाइतेहरुलाई इटा भट्टमा लगाई विभत्स ढंगले हत्या गरेको अभियोगमा पूर्वमन्त्री मोहम्मत अफ्ताव आलम हाल नख्खु जेलमा छन् । यस्तो क्रुर अपराधीलाई छुटाउन कांग्रेस सभापति देउवा टुप्पी कसेर लागेका छन् भन्ने कुरा सुन्दा अभागी नेपालीहरु तीन छक्क परेका छन् ।
रौतहटको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा देउवाले यस्ता क्रुर अपराधी आलमको रिहाइको लागि आफुले भरमजदुर कोशिस गरिरहेको बताउदै आलमजी अहिले जेलमा हुनुहुन्छ, म आफ्नो किसिमले आफ्नो तर्फबाट उहाँलाई छुटाउन मेहनत गरिरहेको छु । देउवाले भने । सो अवसरमा देउवाले कार्यकर्ताहरुलाई धैर्यता राख्न अनुरोध गर्दै भने तपाईहरु धैर्य गर्नुस्, भोलि परिस्थिति बदलिन पनि सक्छ, त्यतिञ्जेलसम्म धैर्य धारण गरेर बस्नुहोला ।
अहिले देशको राजनीतिक मञ्चमा देउवाको दुवै हातमा लड्डु छ । कांग्रेसले चाहेको खण्डमा प्रधानमन्त्रीबाट देउवालाई रोक्ने तागत कुनै माइकालालसँग छैन । यस्तो अवस्थामा कार्यकर्ताबीच परिस्थिति बदलिन पनि सक्छ देउवाले त्यसै भनेका होइनन् । यति देउवा प्रधानमन्त्री भएमा पूर्वमन्त्री आलम जेलमुक्त नहुने कुरै आउँदैन ।
स्मरण रहोस् पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन २०६४ चैत्र २७ गते राति राजपुर नगरपालिकास्थित पूर्वमन्त्री शेख इद्रिसको गोठमा भएको बम विस्फोटमा मान्छे मारेको आरोपमा पक्राउ परेका आलम हाल अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि नख्खु कारागारमा छन् । राजपुर बमकाण्डको १२ वर्षपछि प्रहरीले उनलाई २०७६ असोज २६ मा इद्रिसको गेटबाट पक्राउ गरेको थियो । विस्फोटमा परी मृत्यु भएका र घाइते भएकाहरुलाई नजिकैको इटाभट्टामा लगेर पोलेर मारेको आरोप आलममाथि छ । आलम रौतहटमा प्रभावशाली नेता मानिन्छन् ।
सम्बोधनका लागि रौटहट आउनुपरेपछि सभापति देउवाले आलमका विषयमा सान्त्वना दिँदै कार्यकर्तालाई आश्वस्त पार्न खोजेका थिए । सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले दुई तिहाइ मत पाएर पनि नेकपाले सत्ता सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै कांग्रेसले निकास दिन तयार रहेको बताए । आवश्यकता पर्यो भने देशको नेतृत्व लिन कांग्रेस तयार रहेको पनि उनले बताउ । जुनसुकै परिस्थिति र अन्योलपूर्ण अवस्थामा र चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्दै देशलाई निकास दिन कांग्रेस अघि बढ्ने उनले बताए ।